Sawubona, wonke umuntu, kunezindaba ezinhle eyodwa kithi kanye nawe, sithuthukise umakhi omusha wesitayela sokumiswa esisha. Izithombe zesethenjwa sakho njenge,
Le yimikhiqizo yethu emisha, ihlala kahle kakhulu uma ugqoka, futhi isebenza kakhulu kwi-posture corrector.
QAPHELA KANYE NOKUSEKELA YOKUQHAWULA KANYE NEZIMANGALISO ZOKUVUNA - Ingabe uhlala phambi kwekhompyutha amahora amaningi noma awunakukhathazeka futhi ubuhlungu emhlane nasehlombe? Ungakhathazeki; Kusho ukuthi i-back brace iyasebenza futhi iqondanisa umgogodla wakho ngendlela okufanele ube ngayo! Isihlanganisi se-posture sinikeza ukwesekwa okudingwa kakhulu umzimba wakho ofuna ukukusiza ukuthuthukisa impilo yakho yomgogodla kanye nokuma ngokweqile.
INDLELA YOKUPHILA NOKUQINISEKISA: Yakhelwe kumklamo we-Ergonomics, i-postace brace ikusiza ukuthi ukwazi ukuthuthukisa umhlane oqondile futhi uqinise amahlombe akho, intamo nomhlane, ukudala ukuma okuhle, ukuthuthukisa izinhlungu entanyeni, ehlombe, emuva emuva futhi uguqule imikhuba emibi ye ehefuzela. Noma ngabe udinga ukululama ekulimaleni noma ufuna ukwenza ngcono ukuma, i-SR ilapha ukukusiza. Sebenzisa umucu wokuhlunga we-posture ukulungisa kabusha i-vertebrae yakho, uqinise izicubu zakho, uphinde ubuye nokuhamba!
UMFANEKISO OBONAKALAYO WEZAKHONO: I-SR posture cosmetator, sebenzisa izinto ezingasindi, ezithambile nezifaka umoya omncane ezigcina isikhumba sakho siphilile. I-posture brace eyenziwe ngezinto ezithambile ezinokuphefumula ezingakwazi ukubona ngaphansi kwezingubo. I-clavicle brace ayibangeli ukucasuka kwesikhumba noma ukujuluka, ingagqokwa ekhaya, emsebenzini, noma ejimini.
UKUSEKELWA KWESITHOMBE ESIPHAKAMILE: Ubukhulu be-Universal. Umbhangqwana ongemuva we-corrector unemichilo eguquguqukayo ngenxa yokuthi ilingana nentsha nabantu abadala, amadoda nabesifazane. Kufika indawo yesifuba engu-33 "- 47". Manje njengoba isimo sakho sithuthukile futhi nemisipha yakho yangemuva izizwa inamandla, unesinyathelo esisodwa ESINGODLULA. Sebenzisa ukuze uthole ukuhamba futhi uqedele inqubo yakho yokuphulukisa!
Kungani I-posture Corrector ibaluleke Kokubili Kwabesilisa Nabesifazane?
Isebenza njenge-braceicle brace ukuhlinzeka ukwesekwa kokuma kwe-clavicle ngenkathi isebenza, iphakamisa, ihlala edeskini lekhompyutha, isebenza ehhovisi, njll.
Kuthuthukisa inkumbulo nokufunda futhi Kwenza ubukeke umude, uyinqaba futhi uyathandeka.
Kwenza ubukeke unethemba futhi unamandla futhi kuthuthukisa ukuqondanisa komzimba Kuhlukanisa ubuhlungu obubuyela emuva nasentanyeni & Kuthuthukisa ukuphefumula.
Ungagqokwa kalula ngaphansi kwehembe uma usemsebenzini futhi ungabonakali ngokuphelele ngaphansi kwezingubo zakho.
Sithuthukise i-cosmetac yethu yobuhlungu be-thoracic evimbela ukunqunqa nokululazeka futhi inikeze ukuqondana kwamahlombe.
I-clavicle fracture brace yethu eyenziwe nge-neoprene engasindi, okhanyayo ephezulu.
Ungaqhubeka kanjani nokugqoka i-ukulungisa kwakho yangemuva, ukuthola ukuma okungokwemvelo?
Simply, qala ngokugqoka it imizuzu engu-20-30, uqale ngokunweba kancane isikhathi esichithwa usigqoka imizuzu emi-5 ukuya kwengama-10, bese ukhuphuka ufike ehoreni eli-1 ngosuku.
Lokhu, kuzokwenza ukuma kwakho kube okuphelele futhi bekuzodingeka ukugqokwa ngezikhathi ezithile.